UMadida usola iSafa ngokungamhalaliseli uMosimane ngokuqashwa kwakhe ku-Al Ahly Umbhali wempempe - Impempe
UMadida usola iSafa ngokungamhalaliseli uMosimane ngokuqashwa kwakhe ku-Al Ahly Umbhali wempempe
December 15, 2020 December 15, 2020 lindile
UFANI Madida oke wayibamba kwiBafana Bafana, Kaizer Chiefs nasemaqenjini aseTurkey, ugxeka iSouth African Football Association (Safa) ngokungamhalaliseli uPitso “Jingles” Mosimane ngokuyophakamisa ifulegi laseNingizimu Afrika enhla ne-Afrika.
UMosimane uqophe umlando ngokusayina kwi-Al Ahly yase-Egypt, lapho efike khona waqukula izindebe ezintathu esikhathini esifushane ethathe izintambo. UJingles, obecija iMamelodi Sundowns ngaphambi kokuya e-Egypt, ushiye iqembu laseChloorkop liwine izindebe ezintathu ngesizini edlule, okukhona kuzona nesicoco seligi.
UMadida uthe kumjabulisa kakhulu ukubona umqeqeshi omnyama waseNingizimu Afrika eyoqeqesha enhla nase-Afrika, iqembu elikhulu njenge-Al Ahly.
“Okokuqala engifuna ukukusho kodwa ukuzwakalisa ukuphoxeka okukhulu ngento embi eyenziwe yiSouth African Football Association (Safa) njengabaphathi bebhola bakuleli. Kumbi kakhulu ukuthi iSafa ihlulekile ukuphawula ngokuhamba kukaPitso ekubeni kuyinto enhle nenkulu kangaka. Bavele bathula nje bangasho lutho kanti uMosimane uwumkhiqizo wabo. Angiqondi ngempela ukuthi yini bengashongo lutho eyoqeqesha iqembu elikhulu kangaka,” kusho uMadida.
UMosimane uke wayiqeqesha iBafana ngaphambi kokuthi ajoyine iSundowns. Washuya kuBafana isihiphelene neSa futhi sebefakana ezinkantolo kubangwa imali.
UMadida uthe ukuya kukaMosimane kwi-Al Ahly kungaba nomthelela omuhle kakhulu ebholeni lakuleli. Sekuke kwavela phambilini ukuthi uJingles angase alande abadlali abafana noSamir Nurkovic noKhama Billiat beKaizer Chiefs, kanjalo Gaston Sirino obeyisithandwa sikaMosimane kumaBrazilians.
“Abadlali kanjalo nabaqeqeshi bangase bahlomule kakhulu kulokhu okwenzeke kuMosimane. Amaqembu asezolibuka ngenye indlela ibhola laseNingizimu Afrika. Makhulu amathuba okuthi kube khona abadlali abayodlala enhla ne-Afrika. Naye uPitso angase abize abadlali abathile ababona bebahle emaqenjini akuleli abayise kwi-Al Ahly. Abadlali bethu sebezobhekwa kakhulu emidlalweni yeCAF.
“Nami ngaya eTurkey ngalandelwa yinqwaba yabadlali. Lapha ngibala uJohn “Shoes” Moshoeu, uHelman Mkhalele, uSteve Komphela nabanye. Okwenzeka kimi kwavulela indlela abaningini,” kuphetha uMadida owayengalibheki ipali ngezikhathi zakhe.
Njengamanje umdlali ohamba phambili eNingizimu Afrika, uThemba Zwane, weSundowns, umataniswa nokuya kwi-Al Ahly. UZwane ushaye into ecokeme ngesizini edlule nokuholele ekutheni abuthe imiklomelo ngesikhathi kunePSL Awards. Nakule sizini yeDstv Premiership uzihambela yedwa njengoba esehlohle amagoli ayisithupha emidlalweni eyisithupha yeligi.
Previous Previous post: Uncoma ukuzimisela kubadlali bePirates uTyson
Next Next post: Iyamangaza eyokuqhathwa kwaweNdebe yoMhlaba kusemanje, futhi akekho onezimpendulo